Farmaajo Oo Mar Kale Caqabad Ku Noqday Doorashooyinka - Bulsho News
Galmudug Oo Xariga Kajartay Dekadda Hobyo
Madaxweynaha Muddo Xileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa mar kale qaaday tallaabo carqalad ku ah doorashooyinka dalka, kadib markuu caawa fiidkii xarunta afisyooni uu ka kaxaystay 8 oday dhaqameed oo katirsan 46ka oday ee soo xulaya 11 senetor ee Aqalka Sare kumatalaya Soomaaliland.
Xog ay GOOBJOOG NEWS ka heshay ilo wareedyo gudaha Villa Somalia ah aya tilmaamysa in sideeda Oday oo cawa ka tagay Afisyooni ay lakulmeen Farmaajo iyo Fahad yasiin iyagoo kala hadlay Doorashada Aqalka Sare ee Gobolada Waqooyi.
Waxayna taasi sababtay in Guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi(Soomaaliland) uu sheego in dib udhac uu ku yimid habraacii doorashada aqalka sare ee gobolada waqooyi oo 27 september oo berri ah loo balansana in ay musharixiinta jeediyaan khudbaha.
Ra’iisul wasaare Rooble oo uxilsaaran qabshada doorashooyinka dalka si gaar ah tan gobolada Waqooyi ayaa loo arka in arinkan uu ku noqon doono caqabad hor leh, kadib markii in muddo ah uu Rooble ku hawlana Xalinta Khilaafkii ka dhax aloolsana siyaasiyiinta Gobolada waqooyi.
Wasiirro Kormeeray Xafiisyadda Wasaarradaha Dawladda Ee Laascaanood
Hargaysa: Kulan Ku Saabsan Dib U Eegista Hagaha Maaraynta Cudurrada Ku Dhaca Dhalaanka
Ra iisal wasare Rooble dhex dhexaadin ma ka...
La Ogaaday: Meeshii Ku Laabashada Cristiano Ronaldo Ee...
Gerard Pique Oo Magacaabay Xiddiga Ay Tahay In...
Guriceel: Cabsi dagaal ka dib fashil ku yimid...
Harry Maguire Oo Ka Warbixiyay Dhaawacii Soo Gaadhay.
Madaxweyne Clinton oo isbitaal la dhigay iyo wararkii...
Ciidamada Puntland iyo rag hubeysan oo dagaal culus...
Britain’s fossil fuel dilemma in the spotlight as...